Ciidanka Xoogga Dalka oo la wareegay Bariire | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Ciidanka Xoogga Dalka oo la wareegay Bariire
Ciidanka Xoogga Dalka oo la wareegay Bariire
Taliyaha Danab Gashaanle C/raxmaan sheekh Cumar (Jeeniqaar) ayaa wakaaladda wararka Soomaaliyeed ee SONNA u xaqiijiyey in ciidamadu ay saaka maleeshiyada Al-shabaab ka saareen Deegaanka bariire ee Gobolka Shabeellaha Hoose.
Ciidanka Danab ayaa hadda Howlgallo Baaritaanno ah kawada Gudaha Deegaanka Bariire,iyagoo dhoor miino ah ka saaray Wadooyinka laga soo galo deegaankaas.
Ciidanka dawladda ayaa jab gaarsiiyey maleeshiyada oo muddo dhibaato ku haysay bulshada deegaankaas, waxayna ciidamadu deegaanka ka wadaan hawlo miinooyinka jidadka looga saarayo, taas oo shacabku ay soo dhaweeyeen.
Gobolka Shabeelaha hoose waxaa ka socda hawlgal baaxad leh oo ka dhan ah maleeshiyada Al-shabaab, halka deegaanadii dhawaan laga saarayna ay ka socdaan hawlo shacabka lagu caawinayo maamulana looga hirgalinayo deegaaanada la xoreeyey.
Next articleDhambaalka Madaxweynaha ee Maalinta Shaqaalaha Adduunka 1da May